Madaxweyne Deni iyo Qoorqoor oo hadda kulan u socda iyo War laga helay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Deni iyo Qoorqoor oo hadda kulan u socda iyo War laga helay
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor ayaa hadda si wadajir ah uga qeybgalaya Shirka Iskaashiga Puntland iyo Galmudug oo ka furmay xarunta Madaxtooyada Puntland ee Gaalkacyo.
Kulanka ayaa looga hadlaya Iskaashiga Puntland iyo Galmudug, ee dhinacyada Amniga, isdhexgalka bulshada iyo horumarka dhinac kasta.
Sidoo kale waxaa kulanka looga hadlaya guud ahaan xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan Doorashadda.
RW hore Kheyre oo ku dhawaaqay War niyad jeb ku ah Madaxweyne Farmaajo
Cabdi Xaashi oo War Culus Maanta kasoo saaray Jadwalkii Doorashado ee la…